Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny tolo-kevitr'i Google | Androidsis
DaniPlay | | bateria, Tutorials
Google Tolo-kevitra nandritra ny fotoana elaela hampiasa ny rindranasan'ny mpamorona azy manokana, izay miasa tsara ao anatin'ny tontolo Android. Matetika ny orinasa Mountain View dia manolotra zavatra hafa, isan'izy ireo mitsitsy bateria amin'ny tetika sasany.
Google dia mampiseho tolo-kevitra dimy momba ny fitsitsiana bateria, maro amin'izy ireo no hamela ny processeur sy RAM hiala sasatra kely rehefa tsy ampiasaina ny telefaona. Araho ny torohevitra tsirairay ao amin'ilay taratasy raha tianao hanana fizakantenam-piasa efa ho iray andro ny fitaovanao.
1 Ahenao ny famirapiratana ary apetraho ny famirapiratra mandeha ho azy
2 Esory ireo rindrambaiko ao ambadika
3 Avelao ho faty ny efijeryo
4 Alefaso ny fanatsarana bateria
Ahenao ny famirapiratana ary apetraho ny famirapiratra mandeha ho azy
Ny tolo-kevitr'i Google voalohany dia ny hampihenana ny famirapiratana, noho izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> Brightness Level isika, eto irery ny fanitsiana. Etsy ambany fotsiny dia manana ny safidy «Famirapiratanana mandeha ho azy» isika, ao amin'ilay fizarana milaza hoe «Hatsarao ny haavon'ny famirapiratana mifanaraka amin'ny hazavàna misy», zahao ity safidy ity.
Ny famirapiratan'ny telefaona dia tena manelingelina ny androm-piainan'ny smartphone, noho izany dia soso-kevitra ny hampiasa 45-50% hitehirizana bateria mandritra ny andro. Ireo terminal izay misy batterie mihoatra ny 4.000 mAh dia matetika no mitahiry be loatra raha mihazakazaka an'ity dingana ity ianao.
Raha mandefa fampiharana any aoriana ny findainao dia hanohy hampandeha ilay fampiharana na dia tsy mampiasa ny fitaovanao aza amin'izany fotoana izany. Mba hamerana izany mandehana any amin'ny Settings> Applications> Applications sy fampandrenesana ary ato amin'ity fizarana ity dia jereo ireo fampiharana vao nosokafana, ary koa ireo rindranasa rehetra nohaniny.
Angamba izy io dia iray amin'ireo fizarana mandreraka indrindra, miankina amin'ny fampiharana izay ampiasainao bebe kokoa tsy maintsy manery ny fijanonan'ny fampiharana ianao izay tsy tianao hampiasaina amin'izao fotoana izao. Raha ajanonao ireo izay tsy azonao ampiasaina dia afaka manangona betsaka lavitra noho izay noeritreretinao ianao, ity teboka ity dia somary marefo ihany, fa mahaliana ihany ny mamonjy entana.
Avelao ho faty ny efijeryo
Ny telefaona Android rehetra dia mila mamono ny efijery mba tsy handany loharano, ny telefaona rehetra dia manana safidy hamono ny efijery ho azy raha tsy mampiasa ilay fitaovana ianao. Mba hahatongavana any dia mankany amin'ny Settings> Screen> hampiato izahay (mety miovaova arakaraka ny telefaona io) ary misafidy ny safidy amin'ny segondra vitsy, amin'ity tranga ity dia misafidy 15 segondra isika.
Ny safidy hampiatoana ny jiro dia hahatonga ny terminal hanjifa loharano vitsy kokoa ary aorian'ireo teboka teo aloha dia tsara fa ny safidy tsirairay narahinao tamin'ny taratasy mba hitsitsiana angovo.
Alefaso ny fanatsarana bateria
Avy amin'ireo kinova samihafa amin'ny Android mandroso dia misy ny safidy hanatsara ny bateria, ilaina izany raha te hisoroka ny famandrihana telefaona ianao isaky ny adiny vitsivitsy. Mba hahatongavana amin'ity safidy ity dia mandehana any amin'ny Settings> Battery ary raha vao ao anaty dia mahita ny "Battery save", ampandehano ny safidy mba hitantanana bateria tsaratsara kokoa.
Raha vantany vao ampandrenesinao izany dia hadinoy ny fitantanana ireo masontsivana sasany, satria hametraka ny haavon'ny famirapiratany mandeha ho azy sy ny safidy hafa heverin'ny telefaona iray ho marani-tsaina mba hahafahanao mitahiry isan-jato kely mandritra ny andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny tolo-kevitr'i Google
Ny finday avo lenta vaovao Moto RAZR 5G an'ny Motorola dia efa manana daty famotsorana